Ministère de la sécurité publique | Torolalana
Famerenana ny fitokisan’ny vahoaka amin’ny Polisim-pirenena. Ny asa rehetra izay atao dia atao miatraika mivantana na misy akony amin’ny fiainana andavanandron’ny vahoaka. NyPolisim-pirenena dia miasa ho famahana ny olan’ny vahoaka amin’ny ankapobeny.
Ny fametrahana ny fahefam-panjakana amin’ny alalan’ny fanatanterahana ny asan’ny Polisim-pirenena.
Ny fanamafisana ny ady atao amin’ny kolikoly, indrindra amin’ny fifaninanana handraisana mpianatra ho Polisy.
Fametrahana paikady matipaika sy mahomby amin’ny fanamafisana ny ady amin’ny asan-jiolahy sy ny fakana an-keriny (Kidnapping). Tsy asiana mihitsy ny fandeferana amin’ireo rehetra tafiditra amin’ity raharaha ity. Tsy ekena toy izany koa ny kiantranoantrano na fifampiarovana.
Asiana na anaovana ezaka manokana ny fametrahana ny fanajana ny soatoavina maha olona sy ny zon’olombelona.
Fanaovana laharampahamehana na fanomezana lanja manokana ny asa fisorohana raha mitaha amin’ ny asa fanasaziana amin’ny alalan’ny fidinana eny ankianja na eny ifotony.
Hamafisina ny fiaraha-miasa amin’ireo hery fiarovana sy ny mpitandro ny filaminana hafa.
Lien : https://www.pn.gov.mg/